Sirdoonka Maraykanka oo shaaciyay in Dhaxalsugaha Sacudiga Maxamed Bin Salman uu amray dilkii Khashoggi - Home somali news leader
Home NEWS Sirdoonka Maraykanka oo shaaciyay in Dhaxalsugaha Sacudiga Maxamed Bin Salman uu amray...
TOPSHOT - Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman attends the Future Investment Initiative (FII) conference in the Saudi capital Riyadh on October 23, 2018. - Saudi Arabia is hosting the key investment summit overshadowed by the killing of critic Jamal Khashoggi that has prompted a wave of policymakers and corporate giants to withdraw. (Photo by FAYEZ NURELDINE / AFP) (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)
Dhaxal Sugaha Boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed Bin Salmaan ayaa amray howlgalka lagu dilay suxufiga mucaaradka ah ee Jamal Khashoggi, oo la dilay sanadkii 2018, sida lagu sheegay warbixin ay sirdoonka Maraykanka soo saareen.
Khashoggi, oo deganaa Mareykanka waxna ku qori jirey wargeyskga Washington Post si weyna u dhaliili jirey siyaasadaha amiirka dhaxalka leh, ayaa la dilay oo lagu dhex jarjaray meydkiisii gudaha qunsuliyada boqortooyada ee Istanbul.
Riyaad waxay beenisay wax lug ah oo uu ku leeyahay dhaxal sugaha boqortooyada, dilkii Khashoggi.
“Tan iyo 2017, Amiirka leh dhaxalka boqortooyada wuxuu si buuxda gacanta ugu hayey hay’adaha amniga iyo sirdoonka Boqortooyada, taas oo ka dhigeysa mid aad u adag in saraakiisha Sacuudiga ay fulin lahaayeen howlo noocan oo kale ah iyada oo aan la haysan ogolaanshaha Amiirka dhaxalka leh,” ayaa lagu yiri warbixinta
Maamulka Biden wuxuu ku dhawaaqi doonaa cunaqabateyn iyo fiisooyin loo diido dadkii ku lug lahaa dilkii Khashoggi, inkasta oo aysan cunaqabateyn saareynin amiirka dhaxalka leh sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka.
Maadaama ay dib u soo celineyso xiriirka mid ka mid ah xulafada ugu dhow ee Carbeed, Mareykanka ayaa sidoo kale tixgelinaya joojinta heshiisyada hubka ee lala galayo Sacuudi Carabiya oo keenaya walaacyada xuquuqda aadanaha iyada oo lagu xaddidayo iibka millatari ee mustaqbalka hubka “difaaca”.
Afhayeen u hadlay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa sheegay in Mareykanku diiradda saaray joojinta colaadda Yemen xitaa iyada oo hubineysa in Sacuudi Carabiya ay haysato wax kasta oo ay ugu baahan tahay inay ku difaacdo dhulkeeda.
Khashoggi, oo 59 jir ah, wuxuu ahaa weriye Sucuudi ah oo ku noolaa masaafuris iskiis ah gudaha dalka Maraykanka,
Waxaa uu galay Oktoobar 2, 2018, qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul iyadoo loo ballanqaaday dukumiinti uu u baahan yahay inuu ku guursado saaxiibtiis Turkiga ahayd. Koox hawl-wadeenno ah oo lala xiriirinayo MBS ayaa ku dilay halkaas, jirkiina way jarjareen,maydkiisiina lama helin.
Riyaad markii hore waxay soo saartay sheekooyin is khilaafsan oo ku saabsan maqnaanshihiisa, laakiin aakhirkii waxay qirtay in Khashoggi lagu dilay waxa ay ugu yeertay hawlgalkii dhiibistii “anshax xumada”.
Kow iyo labaatan nin ayaa loo qabtay dilkiisa, shanta sarkaal ee sarsare oo uu kujiro kuxigeenka taliyaha sirdoonka, Ahmed al-Asiri, iyo Saud al-Qahtani, oo ah caawiye sare MBS.
Bishii Janaayo 2019, 11 qof ayaa maxkamad la soo taagay iyagoo albaabbadu u xirnaayeen. Shan ka mid ah waxaa lagu xukumay xukunno dil ah, kuwaas oo loo beddelay 20 sano oo xabsi ah ka dib markii ay cafiyeen qoyska Khashoggi, halka saddex kalena lagu xukumay xukunno xabsi ah.
Asiri waa la maxkamadeeyay laakiin waa la siidaayay “cadeymo aan ku filneyn darteed,” ayuu yiri xeer ilaaliyaha, halka Qahtani la baaray laakiin aan wax dacwad ah lagu soo oogin.
Illaa iyo hada wax jawaab ah kama bixin Boqortoyada Sacudi Carabiya warbixintan ay sirdoonka Maraykanka soo saareen.
Previous articleThe EU Medicines Agency approves Regeneron’s Covid-19 synthetic antibody therapy
Next articleThe FDA panel supports Johnson & Johnson’s single-dose Covid-19 vaccine